Fantaro hoe iza ireo sakafo abortifacient hialana | Nutri Diet
Ny natiora dia afaka manome antsika sakafo isan-karazany izay manampy antsika amin'ny lafin'ny fiainana andavanandro. Amin'ity tranga ity dia te hiresaka momba izany izahay sakafo abortifacient, ny sakafo sasany izay mahatonga ny vehivavy dia afaka manala voajanahary.
Ny fanalan-jaza dia olana manolo-tena tokoa, tianay ny mifanakalo hevitra sy milaza amin'inona ireo sakafo ireo manana ireo fananana fanalan-jaza ireo izy ireo Fomba voajanahary.
Ny karazan-javamaniry sasany dia nampiasaina foana hanampiana amin'ny fanalan-jaza, zavamaniry tena mahazatra izy ireo ary misy ho an'ny rehetra, na izany aza, tsy maintsy mahay mandany azy ireny mba tsy hanan-tahotra raha bevohoka ianao.
1 Zavamaniry izay mety hiteraka tsy fetezana eo am-bohoka
2 Sakafo tokony hodinihina mandritra ny fitondrana vohoka
2.4 Asiatic spark
2.6 Masomboly sesame
Zavamaniry izay mety hiteraka tsy fetezana eo am-bohoka
Tsy maintsy fehezina ny dosie amin'izay ny zavamaniry dia tsy miteraka fahavoazana ho an'ilay olona na ilay foetus. Misy loza mety hitranga amin'ny karazana zavamaniry sasany raha lany loatra izy ireo, noho io antony io dia holazainay aminao hoe iza amin'ireo no tsy maintsy fehezinao.
Betsaka ny tsy fantatra momba ny sakafo mandritra ny fitondrana vohoka sy ny fampandrosoana ny aretina, tandremo hahalala ireo zavamaniry sy sakafo mety hanimba.
Wormwood amin'ny doka avo.
Cascara sagrada, senna ary frangula.
Menaka manitra Juniper.
Boldo sy zavamaniry manadio.
Fatra ambony nutmeg.
Menaka ilaina amin'ny persily.
Sakafo tokony hodinihina mandritra ny fitondrana vohoka
Raha mitady ho bevohoka ianao na raha efa eo amin'ny fitoeran-tongotra ianao dia tokony ho fantatrao fa ny sakafo izay holazainay anao eto ambany dia mety hahatonga anao hamoy ilay zaza.
ny sakafo abortifacient Manana toetra, toetra ary toetra tsara tokony ho fantatsika rehetra izy ireo.
Ireo sakafo ireo dia salama amin'ny fotoana rehetra iainantsika, tsy mitondra fahavoazana ho antsika anefa izany. mila mihinana azy ireo am-pitandremana isika ary mandrefy raha bevohoka ianao.
Hitantsika Zava-pisotro sy sakafo izay mitaona ny fanalan-jaza, dia tokony hialana mba tsy hahavery ny zaza.
Tsy ny vehivavy rehetra no mihetsika mitovy, noho izany io fampahalalana io dia iraisan'ny olona.
Mikasika ny sakafo, fahasalamana ary olona samy hafa ny fihetsiky ny tsirairay.
Safidio ny manatona ny dokotera anao raha mila torohevitra sy hevitra tsara ianao ireo sakafo heverinao fa mampidi-doza indrindra.
La papaya maintso lany nandritra ny volana voalohany ny fitondrana vohoka dia mety hiteraka fanalan-jaza tsy nampoizina vokarin'ny fihenan'ny tsy voafehy.
Papaya dia manana anzima mampidi-doza ho an'ny vehivavy bevohoka.
Io voankazo tropikaly io dia lanina saika manerana an'izao tontolo izao. misy bromeliad, singa iray izay manalefaka ny rindrin'ny tranonjaza amin'ny alàlan'ny fanentanana ny fifanolanana kely. Ny ranona mananasy dia ampiasaina amin'ny kolontsaina maro hanentanana ny asa rehefa lany ny asany.
Afaka mihinana paiso be dia be mamokatra ra mihombo sy fahaverezan-jaza mandritra ny herinandro voalohany vohoka. Noho io antony io dia aza atao ny mihinana paiso mandritra ny herinandro vitsivitsy.
Mahagaga ny fananan'ny fanafody gotu kola. Izy io dia entina hifehezana ny tosidra, hanampy amin'ny fanasitranana, ny tosidra na hampihena ny mari-pana amin'ny vatana.
Etsy ankilany, azonao atao izany ambany ny tahan'ny fahavokarana amin'ny vehivavy na amin'ny tranga sasany dia miteraka fanalan-jaza tsy ilaina.
Ny aloe vera dia tena mahasoa ny vatana, na dia mihinana amin'ny endrika zava-pisotro voajanahary aza Izy io dia mety hiteraka rà sy fahaverezan-jaza.
Ny masomboly sesame dia manomboka laniana betsaka kokoa, mahasoa nefa omena amin'ny antonony.
Amin'ny tranga sasany mety hiteraka afa-jaza ary tsy amporisihina handany azy ireo amin'ny tantely izy ireo. Any amin'ny faritra sasany any Atsinanana, ny voa sesika mainty dia lanina alohan'ny fanaterana mba tsy haharary firy.
Ny atiny laniny na natsatsika, na namboarina na natsipy tao anaty pâté dia mety ho voaloton'ny poizina maro izay avy amin'ilay biby mihitsy. Raha lanintsika betsaka izy io hampitombo ny vitamina A sy ny kolesterola azontsika isika, rehefa afaka manala zaza.
Tena zava-dehibe fantaro izay zavamaniry sy sakafos izy ireo dia afaka manana ireo voka-dratsy tsy ilaina amin'ny resaka fitondrana vohoka.
Zavamaniry manala zaza Azon'izy ireo atao ny manatratra ny fahatapahan'ny fitondrana vohoka amin'ny fomba voajanahary nefa tsy mampidi-doza ny vehivavy, kanefa, tsara ny tsy manararaotra zava-maniry na zavamaniry satria raha tsy fantatsika ny fatra sahaza azy mety hijaly hemorrhage lehibe isika na tsy hanala zaza ary hiteraka fahasimbana eo am-bohoka.
Tena ilaina ny manatona dokotera alohan'ny fisalasalana mety hitranga. Tsy amin'ny tranga zavamaniry manala zaza ihany, fa amin'ny sakafo mety na tsy mety rehefa bevohoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Sakafo fanalan-jaza hialana raha bevohoka ianao
Salama, marary i Jamaika ????